Boorsooyinka Shandadaha Kubbadda Cagta ee Shiinaha Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsadaada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsooyinka Basketball-ka
1. Boorsada Basketball product introduction:
(1) Waxaan hagaajinay naqshadda bacda asalka ah ee kubbadda koleyga, oo xambaarsan baahiyo iyo waxyaabo badan. Boorsadeena kubbadda koleyga ee '2.0' waxaa ku jira jeebka hore ee xarigga loogu talagalay kubbadaha waaweyn ee buuxa iyo qol loogu talagalay keydinta dharka, biyaha iyo qalabka.
(2) Naqshadeynta dharka. Waxaan u qaabeynay boorso jimicsi qumman oo leh qaybo mesh neefsasho ah oo loogu talagalay dhidid dhidid, xargaha garbaha oo duuban iyo laba jeeb oo dhinaca laastik ah ah oo lagu hayo biyaha. Ka fudud ka badan shandadaha isboortiga ama bacaha isboortiga, kuweenna ayaa aad ugu habboon ciyaaraha qoyska iyo kuwa aan caadiga ahayn!
(3) Dhajinta Wax kasta oo loo baahan yahay tartanka usbuuca waxaa lagu buuxiyaa hal boorso. Kubbadda koleyga gadaal waxaa ku jira sanduuqa wax lagu keydiyo oo kaydin kara kabaha ilaa cabirka 14, xitaa wuxuu siiyaa jiinyeer sare taleefankaaga iyo waxyaabaha yaryar. Awoodda kubbadda qaadistu waa isku mid, laakiin baakadaha ayaa ka yar.
(4) Difaaca biyuhu. Waxaan u maleynay inaynaan kafiicanayn shandada kubada kolayga, laakiin waan sameynay! Bacda 2.0 ee aan qaabeynay waxay ka sameysan tahay 100% fiber fiber-ka polyester-ka ah oo waara si ay uga dhigto mid biyo-la’aan ah, sidaa darteed dharka dhididsan iyo maalmaha roobku dhib kuma jiraan.
(5) Loogu talagalay kubbadda koleyga. Kubbadda Koleyga waa dhiiggeenna, sidaa darteed waxaan ognahay muhiimadda ay leedahay in la helo qalab tayo leh. Waan ku faraxsanahay inaan caawinno ciyaartoy sida adiga oo kale ah inaad ka faa'iideysato ciyaarta. Waxaa naga go’an inaan siino ciyaartoy kasta badeecadaha ugu tayada sareeya.
3. Boorsada Basketball product parameters (specifications)
210D dahaarka nylon
Dhererka 52cmX Width 38cmX Dhererka 40cm
Badeecadaha isboortiga dibadda
4. Sida loodooro boorsada kubbadda koleyga ugu fiican?
Shandad noocee ah ayaad ubaahantahay?
Ma qorsheyneysaa inaad u isticmaasho boorsada kaliya kubbadda koleyga? Mise weli waxaad dooneysaa inaad u isticmaasho boorsada iskuulka / iskuulka? Haddii aad raadineyso boorso shaqeyneysa oo shaqeysa, qaar waxay leeyihiin qaybo dheeri ah si ay uga soocaan dharka wasakhaysan buugaagta ama ay ugu keydsadaan laptop-yada si aamin ah. Boorsooyinkan isku dhafan waxay kuu badbaadin karaan lacag aad u tiro badan maxaa yeelay uma baahna boorso jimicsi oo dheeri ah!
(1) Tayada tayada iyo adkeysiga.
Haddii aad qorsheyneyso inaad boorsada ku isticmaasho tiro badan, hubi inay tayo wanaagsan tahay. Raadi waxyaabaha biyaha u adkaysta sida nylon, polyester ama shiraac cufan leh. Calaamadaha kale ee tayada leh waa tolmo wanaagsan iyo jiinyeyaal tayo sare leh â € “ma doonaysid inaad iska tuurto boorsadaada maxaa yeelay jiinyeertu mar dambe ma xirmayaan ama tolladu way kala furan yihiin.
(2) Raaxo waa wax aad muhiim u ah, gaar ahaan haddii aad rabto inaad isticmaasho boorsada dhabarka maalin kasta. Hubso in suumanka iyo barkimooyinku yihiin barkimooyin iyo miisaanka si siman loo qaybiyo. Ku darista suunka (mararka qaarkood loo yaqaan suunka sternum) inta udhaxeysa labada garabka garabka sidoo kale waxay kordhin kartaa raaxada.
(3) Boorsadaan waxaa loogu talagalay isboortiga! Kaliya maahan inay bixiso qayb ballaaran oo kubbadda koleyga ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay looxyo loo yaqaan 'Velcro loops' oo labada dhinac ah, wareeg walbana wuxuu qaban karaa fiidmeerka kubbadda koleyga. Kudar laba jawaan oo mesh ah dhinaca biyaha, waxaad si fudud ugu duubi kartaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay jimicsiga!
(4) Wax kasta oo aad ugu baahan tahay barashada kubbadda koleyga. Halkaan waxaa ku yaal meel kufilan oo lagu xareeyo kubbadaha, kabaha, yunifoomka, dhalooyinka biyaha, iwm. .
(5) Qafiska kubbadda koleyga wuxuu sahlayaa rarida iyo dejinta kubbadda koleyga, albaabkiina waa la furey, qof walbana wuu arki karaa kubbaddaada kubbadda koleyga ah ee quruxda badan.
5. Warshad soo bandhigid toogasho dhab ah
6. Boorsada Basketball packaging and delivery
(2) Cabbirka baakadka ee caadiga ah: dherer dhererkiisu yahay 52cmX 38cmX dherer 40cm ah, waxaannu u qaabeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 54cm X 40m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 14Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonnaa baakadka boorsada kubbadda koleyga si waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka shandaddan kubbadda koleyga, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
7. Adeegga iibka kadib
500-1000 wareegga wax soo saarka wareegga 30-35 maalmood.
1000-3000 wareegga wax soo saarka 35-40 maalmood.
3000-5000 wareegga wax soo saarka 40-45 maalmood.
5000-10000 wareegga wax soo saarka wareegga 45-50 maalmood.
(3) Waxaan nahay soo saare boorsooyinka kubbadda kolayga ee Disney, boorsooyinka Wal-Mart iyo badeecooyinka Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsooyinka Basketball-ka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka